manaiky ho fitaovana tsara eo ampelatanan'i Tompo ve hianao? - Le blog de midera
manaiky ho fitaovana tsara eo ampelatanan'i Tompo ve hianao?
Publié le 8 novembre 2007 par midera
Mba tiako ho zaraina amintsika izay sendra mitsidika eto ny tenin'Andriamanitra voaraiko omaly tany amin'ny fotoam-bavaka novonjeko.Nahafinaritra sy nandraisako lesona vaovao tsara dia mba tiako ho zaraina amintsika.
Tantaran'ilay lehilahy nalemy tongotra nahazo fanasitranana tamin'i Petera sy Jaona teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly, ASA 3.
Efa imbetsaka no nandrenesako hafatra momba io teny io, ary inoako fa toy izany koa hianao.Fa ny voaraiko omaly dia amin'ny fomba hafa indray.Izay mihintsy ilay hoe, tsy lany ritra ny hafatra tian'i Jesosy ambara amintsika.
Fahagagana voalohany nataon'ny mpianatry ny Tompo taorian'ny nataon'i Jesosy rehetra ity miseho eto ity.Taorian'ny nandraisan'izy ireo ny fahafenoan'ny Fanahy Masina no nahafahan'izy ireo nanao izany.Ny fahafenoan'ny Fanahy ao amintsika ihany no ahafahantsika mahita fahagagana eo amin'ny fiainantsika sy ny manodidina antsika.Tokony ho feno ny Fanahy mandrakariva isika mba ho fitaovana tsara eo ampela-tanan'ny Tompo hanaparitaka ny fahazavany sy ny fahagagany amin'ny manodidina antsika rehetra.
Teny an-dalana ho any amin'ny tempoly no nahitan'izy roa lahy ity marary ity, rehefa feno ny Fanahy hianao, dia na eny an-dalana misy anao eny dia afaka manao fahagagana hianao, firy ny olona manana olana , na tsy fahasalamana io na olana hafa mifanerasera aminao isanandro no andalovanao fotsiny, miantso anao ny Tompo mba tsy handalo fotsiny ireny olona ireny, izay no nanirahana antsika, hitondra fifaliana sy hizara ny fitiavan'i Jesosy amin'ireny olona ao anatin'ny fijaliana sy fahantrana ireny.Hoy i Petera: '' tsy manana volamena na volafotsy omena anao aho, fa izay ananako no omeko anao'' , ny tsara indrindra no nomeny azy , dia Jesosy Kristy izay sady Mpamonjy no mpamela heloka, no be indra-fo, no manasitrana indrindra koa.
Noho ny herin'ny Fanahy tao amin'izy roa lahy sy ny finoan'ity marary ity dia sitrana soa aman-tsara izy ary dia nitsangana sy nidera an'Andriamanitra.
manahoana ny ao anatintsika ny alahady maraina rehefa handeha ho any antranon'Andriamanitra isika, fo feno ny Fanahy , feno hetaheta hiaona @ Tompo sa fo avy niady tamin'ny vady, avy nikorontana t@ ankizy, t@ mpitondra bus.... manantena ny hiaona amin'ny Tompo ve isika amin'izany? diniho tsara ny fonao raha handeha hiaona @ Tompo hianao, raha te hahatsapa ny kasiny sy ny voninahiny.
manaraka izany, dia fantantsika tsara fa tsy izy roa lahy akory no nanao fahagagana fa Jesosy velona izay tao anatin'izy ireo.Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta hoy i Petera, mitsangatsangana! ary dia nitsangana niaraka tamin'izay ralehilahy.
Azontsika antsaina ve ny herin'io anarana lehibe io? maro amin'ny kristianina no efa miteny azy io ho fahazarana fotsiny ihany, ho toy ny ''mot de passe'' fanombohana sy famaranana vavaka fotsiny ihany, hany ka lasa tsy tsampantsika intsony ny heriny sy ny fahalebiazany.
isaky ny hanonona izay anarana lehibe izany isika dia tsarovy fa manonona ny heriny sy ny voninahiny rehetra sy ny fahefany sy ny momba Azy rehetra.Lasa fahavetavetana eo anatrehany ny fanononantsika ny anarany raha tsy azontsika akory ny dikany rehetra.
Noho izany, na inona ataontsika na inona lazaintsika dia tsarovy hatrany fa irak'Andriamanitra isika, izay ambarantsika sy ataontsika dia tokony mitory Azy.
aza variana @ olana rehetra manavesatra antsika amin'ity tany ity fa manjary tsy hitantsika ny voninahitry ny Tompo eo amin'ny fiainantsika.
Apetraho aminy avokoa izay rehetra mbola mikotringa eo amin'ny fiainantsika, avelao Izy handray antanana tanteraka ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika, ny anjarantsika dia ny manaiky ho tarihiny, ny manaiky ho fitaovana tsara eo anatrehany, ny manaiky ho irahiny, miambina ny vavantsika sy ny fanahintsika , ny saintsika ary ny momba antsika rehetra tsy hisy pentina.
Dia ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra.
HO AZY IRERY IHANY NY VONINAHITRA MANDRAKIZAY , AMEN!
« novelariny ao am-poko! Amin'ny andro rehetra... »